Ny tsara ho fantatra rehetra raha hijery mivantana ireo lalao aty Egypta – Gasy Egypte
Ny tsara ho fantatra rehetra raha hijery mivantana ireo lalao aty Egypta
July 2, 2019 July 3, 2019 Mihaja Rasoanaivo
“Miara-mirona hatrany ny ekipa Malagasy BAREA ary hiatrika indray ny lalaon’ny ampaha-valondàlana ny alahady faha 7 jolay ho avy izao amin’ny 7 ora aty Egypta Aleksandria. Maro be ireo manam-pikasana sy faniriana hiaina izany lalao izany mivantana. Misy anefa ireo toromarika isan-karazany sy pitsopitson’ny tsy azo atao ambanin-javatra mihintsy ho an’ireo mpijery mivantana any amin’ny kianja.”
Anisan’ny fanontaniana miverimberina voarainay ny hoe :”Inona no tokony atao fa izahay te handeha hijery ilay lalao mivantana amin’ny alahady?” Raha vantany vao voasafidy handray ity lalao iadina ny tompon-dakan’ny Afrika ho an’ny baolina kitra ity Egypta dia nanomana izany volana maromaro mihintsy mba hahatomombana sy hahatontosa ny zavatra rehetra hatramin’ny farany. Betsaka arak’izany ny lamina izay tsy maintsy arahin’ny mpijery indrindra fa ireo mijery mivantana any amin’ny kianja na stade.
Voalohany amin’izany dia ny taratasy rehetra momban’ny fandehanana sy fidirana aty Egypta, ka ho an’ny Passeport Malagasy no tiana hamafisina: fa mila VISA miala avy any amin’ny masoivoho Egyptiana (Visa touristique entrée unique no tsotra indrindra). Ireo Malagasy diaspora ihany koa dia afaka mangataka io VISA io eny anivon’ny masoivoho egyptiana amin’izay toerana misy azy. Ity no tsapa fa mavesatra sy sarotra indrindra ho antsika te hijery mivantana ny lalao aty Egypta.
Faharoa manarak’izany dia ny fandehanana any Alexandrie. Ny ankamaroan’ny sidina (amin’ny vidiny mirary) dia miazo ny renivohitry Egypte avokoa: Le Caire. Eo aminn’ny 250km eo no alavirana ary làlana atao anatin’ny ora 3 raha be indrindra fa arakarakin’ny “moyen de transport”. Izy ireo indray dia maro raha avy ao Caire: train, bus na fiara tsotra afaka hofaina any an-toerana.
Ny fahatelo farany dia ny fidirana ny kianja. Ity no betsaka pitsopitson’ny araka ny efa nolazaina teny am-piandohana ho fitandrona ny filaminana mandritra ny fizotry ny lalao. Raha ny mahazatra antsika rehefa hijery baolina eny Mahamasina dia milahatra mividy tapakila, mampiseho izany izay vao afaka miditra ny kianja, toy izao kosa rehefa hijery CAN aty amin’ireo kianja aty Egypta:
Mila manana ilay atao hoe “Fan ID” : Izy ity dia “badge électronique” misy ny mombanao rehetra sy “code barre”. Marihina
Mpijery baolina Malagasy sy Egyptiana miaraka am FAN ID
Ahoana no atao ahazoana ilay Fan ID?
Manokatra ilay site Tazkarti.com ary mameno izany mba hahafahanao manokatra profil (toy ny amin’ny facebook ihany fa ny “contact” no tena zava-dehibe), mandefa copie passeport sy photo ID 4*4 mazava tsara (scanné no tena tsara). Rehefa vita ireo dia manao sivana ireo profil rehetra ny birao nosokafana manokana any Egypta hanara-maso ny mpijery ka mamaly anao. Mahazo ny antsoina hoe “Numéro Fan ID” ianao amin’ny alalan’ny contact izay nomenao ary nahazo alalàna hiditra ny kianja nefa misy ihany koa ireo tsy mahazo valiny (profil refusé).
fa ankoatry ny tapakila dia tsy maintsy manana ity Fan ID ity avokoa rehefa hiditra ny kianja. Ity dia azo antsoina ihany koa hoe “Accès au Stade”. Arak’izany na iza na iza te hiditra ny kianja dia tsy maintsy manana ity Fan ID ity ary amin’ny maha-électronique azy dia mandalo “borne électronique” ihany koa izany vao tafiditra. Azontsika tsirairay sary an-tsaina angamba ilay izy.
Manana Numero Fan ID
Mividy tapakila fidirana amin’ny alalan’ny site: Tazkarti.com ihany.
Ny tapakila fidirana sy ny Numero ID no mila entina eny amin’ny masoivoho Orange aty an-toerana andraisanao maimaim-poana ilay Fan ID na ilay “badge électronique” nolazaina tetsy ambony.
Miandry ny fotoana fa tsara foana raha tonga mialoha manoloana ny stade satria tsy maintsy misy ny filaharana eo am-pidirana.
FAN ID miaraka am tapakila
Mahasolo ny Fan ID ve ny Passeport?
Nandritra ny lalao fanokafana, ny lalao rehetra teo aloha dia notakiana foana ilay Fan ID. Amafisinay kosa anefa fa tamin’ny lalao farany teo (MDG vs NGA) dia nisy ireo mbola tsy nahazo ny azy ka tafiditra ihany tamin’ny alalan’ny Passeport. Noho izany, eny mahasolo ilay Fan ID ny passeport. Sarotiny indrindra ny amin’ny resaka filaminana ny egyptiana, ka aleo miomana foana ihany.
Vonona hatrany ary am-pitiavana no handraisanay Malagasy eto Egypta antsika mpiray tanindrazana manam-pikasana hanotrona ny BAREA ka ho avy hijery mivantana ny lalao ho tanterahina rehetra aty an-toerana.
Accueil, Activites et Divers, Les Chroniques de Mihaja, Les incontournables, News Diplomatiques, Spécial CAN Egypt 2019, Vaovao
La Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2019) pourra-t-elle supprimer les frontières ?
Des supporteurs Malagasy viendront spécialement pour soutenir les BAREA en Egypte